फेशन वाल आर्ट, फेशन सेट प्रिन्ट, फेशन क्यानभास, फेशन प्रिन्ट | आकर्षण फैशन स्टोर
हाम्रो फैशन वाल आर्टको बारेमा समीक्षा
फैशन परिपूर्ण प्रिन्ट
फैशन ब्याग प्रिन्ट
फैशन जूता प्रिन्ट
फैशन प्रिन्ट अन्य
फैशन लोगो प्रिन्ट
फैशन डग / क्याट प्रिन्ट
फैशन SE सेट प्रिन्ट
फैशन लड़की प्रिन्ट
मेनु साइट नेभिगेसन
वस्तु गाडी थपियो। गाडी र जाँच हेर्नुहोस्.
AllureFPressStore मा स्वागत छ! हामी can बर्ष भन्दा बढि क्यानभासमा पेन्टि। गर्दै आएका छौं र हाम्रा ग्राहकहरूबाट धेरै सकारात्मक समीक्षाहरू प्राप्त गर्दछौं। हाम्रो स्टोर र उत्पादन यूक्रेन मा अवस्थित छन्। हामी फेसनबाट प्रेरणा पाएका छौं र हाम्रो चित्रलाई प्रेमको साथ बनाउँछौं। हामी तपाईंलाई हाम्रो स्टोरको साथीको रूपमा देख्न पाउँदा खुसी हुनेछौं।
फेशन भित्ता आर्ट, फेशन सेट प्रिन्ट, फेशन क्यानभास, फेशन प्रिन्ट
नियमित मूल्य $ 132.00
आकार ११x१ inches इन्च / २xx10 cm सेमी ११x१ inches इन्च / २xx12 cm सेमी ११x१ inches इन्च / २xx14 cm सेमी ११x१ inches इन्च / २xx16 cm सेमी ११x१ inches इन्च / २xx18 cm सेमी ११x१ inches इन्च / २xx20 cm सेमी ११x१ inches इन्च / २xx24 cm सेमी ११x१ inches इन्च / २xx30 cm सेमी ११x१ inches इन्च / २xx36 cm सेमी
११x१ inches इन्च / २xx10 cm सेमी - $ .10 .26० अमेरिकी डलर ११x१ inches इन्च / २xx12 cm सेमी - $ .12 .31० अमेरिकी डलर ११x१ inches इन्च / २xx14 cm सेमी - $ .14 .36० अमेरिकी डलर ११x१ inches इन्च / २xx16 cm सेमी - $ .16 .41० अमेरिकी डलर ११x१ inches इन्च / २xx18 cm सेमी - $ .18 .46० अमेरिकी डलर ११x१ inches इन्च / २xx20 cm सेमी - $ .20 .51० अमेरिकी डलर ११x१ inches इन्च / २xx24 cm सेमी - $ .24 .61० अमेरिकी डलर ११x१ inches इन्च / २xx30 cm सेमी - $ .30 .76० अमेरिकी डलर ११x१ inches इन्च / २xx36 cm सेमी - $ .36 .92० अमेरिकी डलर
आकर्षण फैशन स्टोरमा तपाईंलाई स्वागत छ!
लिंकमा क्लिक गरेर तपाईं हाम्रो खरीददारहरूको समीक्षासँग परिचित हुन सक्नुहुन्छ:
कृपया ड्रपडाउन मेनूबाट तपाईले चाहानु भएको साइज चयन गर्नुहोस्।
आकार प्रत्येक चित्रकला को लागी संकेत गरीएको छ
लागत set सेट को लागी संकेत गरीएको छ
हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि तपाईले आफ्नो नाप लिनुहोस् खरीद गर्नु अघि तपाईको भित्री भागको लागि सबैभन्दा उपयुक्त क्यानभास आकार छनौट गर्नका लागि।
चित्र भित्ता स्थापनाको लागि पूर्ण रूपमा तयार छ। डेलिभरी पछि, तपाईले गर्नुपर्ने भनेको भित्तामा पेन्टि hang ह्या .्ग गर्नु र अद्भुत कलाको आनन्द लिनु हो।
- १००% प्राकृतिक क्यानभास।
- EPSON अल्ट्रा क्रोम HDR pigment स्याही (१०० वर्ष को ग्यारेन्टी, सुरक्षित, फीड प्रतिरोधी प्राकृतिक मसी)।
- प्राकृतिक क्यानभास एक प्राकृतिक काठ फ्रेम - पाइन मा फैलाइएको।
- माउन्ट स्टेनलेस स्टीलको बनेको छ।
चमक, स्फटिक, कपडा जुन क्यानभासमा चित्रित हुन्छन् शारीरिक होइन, तिनीहरू क्यानभासमा फोटो प्रिन्ट हुन्।
तपाईंको स्क्रीनमा प्रदर्शित रंगहरू तपाईंको स्क्रिन सेटिंग्सको कारण वास्तविक प्रिन्ट र colorsहरू भन्दा अलि फरक हुन सक्दछन्।
भुक्तानी पछि तुरून्त, हामी प्रिन्ट गर्न तपाईंको अर्डर पठाउछौं, खरीद पछि, कुनै परिवर्तनहरू गर्न सकिदैन, कृपया खरीदहरू भन्दा पहिले सबै परिवर्तनहरू अनुरोध गर्नुहोस्।
* अर्डरको तयारी
चित्रहरु बनाउन हामीलाई २--2 कार्य दिन चाहिन्छ।
उत्पादन समय बढाउन सकिन्छ यदि तपाईंको अर्डर थोक हो भने।
हाम्रो उत्पादनहरू विशेष रूपमा हातले बनाएको हो।
हामी हाम्रो चित्रकला दुनिया भर मा पुर्‍याउँछौं। सबै शिपमेंटहरू केवल हवाईजहाजबाट गरिन्छ, जसले डेलिभरीलाई गति दिन्छ।
कार्डबोर्ड, बबल र्याप र स्ट्रेच र्यापले बनेको बहु-तह प्याकेजिंग। हाम्रो लागि यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं तपाईंको अर्डर पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग कुनै थप प्रश्नहरू छन् भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी सँधै देशहरूबाट ग्राहकहरूको अनुरोधमा तुरून्त जवाफ दिन सक्षम हुँदैनौं जुनसँग घण्टामा हामीसँग ठूलो भिन्नता छ।
हामी तपाईंलाई हाम्रो ग्राहकहरूको बीचमा हेर्न पाउँदा खुसी हुनेछौं!
© सबै डिजाइनहरू, टाइपोग्राफी, चित्रण र डिजाईनहरू AllureFPressStore द्वारा सुरक्षित गरिएको छ।
सबै कार्यहरू व्यावसायिक प्रजननको लागि प्रयोग गर्न सकिदैन।
चित्रमा चित्रित गरिएका प्रसिद्ध ब्रान्ड, लोगो, ट्रेडमार्कका कुनै पनि छविहरू म वा मेरो स्टोरले सिर्जना गरेको छैन। ती चित्रहरु मा चित्रित गरीएको छ किनकी यी ब्रान्डहरु को लागी माया को कारण; म सँधै यी अद्भुत ट्रेंडसेटरहरूबाट प्रेरणा पाएको छु।
मेरा सबै चित्रहरु, तपाइँ को लागी प्यार संग चित्रित छन्!
फेसबुक मा शेयर Twitter मा Tweet Pinterest मा पिन
FASHION3SET PRINT मा फिर्ता
2021 २०२०, आकर्षण फैशन स्टोर . पसिना